Ibsa MM Itoophiyaa Abiy Ahimad: Lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 86 gahe - BBC News Afaan Oromoo
Ibsa MM Itoophiyaa Abiy Ahimad: Lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 86 gahe
4 Sadaasa 2019
Hokkora tibbana uumamee tureen namoonni 86 lubbuu dhabuu MM Abiy Ahimad Dilbata waajjira isaaniitti ibsa kennanniin himaniiru.
Wanti raawwate kan 'boquu nama cabsudha' jedhan MM Abiy.
Ibsi isaan kennan namoota yaadaan iddoo gara garaatti qoode, yaadoti adda addaa marsaalee hawaasaa irratti kennamaa turan.
Ibsi MM Abiy kun lakkoofsa namoota du'anii duuchaadhumatti himuu bira darbee, namootni lubbuu dhaban saalaan, sabaan, amantaan eenyu akka ta'an kan himudha.
Namoota lubbuu dhaban 86 keessaa 82 dhiira yoo ta'an 4 dubartoota.
"Itoophiyaan 'duguuggaa sanyii' irraa of eeggachuu qabdi"
Hookkara tibbana Oromiyaa keessatti uumame booda namoonni 359 to'ataman
Sabaan Oromoo 50 , Amaarri 20, Gaamoo 8, Silxee 2, Guraagee 1, Hadiyyaa 2, Argobbaa 1 fi namni 1 ammoo sabaan adda baafamee hin beekamne jedhan.
Amantaadhaan, namoota lubbuu dhaban keessaa 40 Kiristiyaanota yoo ta'an, 34 Musliima. Kan hafan 12 amantaa adda addaa kan hordofan ta'uu himan.
Akka MM Abiy jedhanitti lakkoofsa kana akka kanatti himuun kan barbaachiseef, "rakkoon tokko yoo mudatu, sabni hin ajjeesne, saalli hin ajjeesne, amantaan hin ajjeesne akka hin jirre akka irraa baratamuufi" jedhan.
"Itoophiyaa keessatti abiddi walitti bu'iinsaa yoo boba'u hunda walqixa guba," jedhan MM Abiy.
Namoonni 76 lola waliiniin kan wal ajjeesan yoo ta'u, namoonni 10 humnoota nageenyaan ajjeefamani jedhan.
Akkamiin yaada namaa gargar qoode?
Lakkoofsi fi eenyummaan namoota ajjeefamanii akka kanatti sabaafi amantaan adda bahe himamuun namoota hunda hin gammachiifne.
Gazexeessaa fi barreessaa Bafiqaaduu Haayiluu "tarii yoon ajjeefame, namni amantaa hin qabne, namni saba hin qabne tokko ajjeefame jedhaa malee, adaraa godoo xiqqoo keessatti na daangessitanii lammata nan ajjeesinaa," jechuun barreesse.
Namoonni yaada kana deeggaruun marsaalee hawaasaa irratti barreessan, nama sabaafi amantaan lakkaa'uun namooma isaanii xiqqeessuudha jedhanii falmu.
Ammoo walitti bu'iinsa birootiif karra banuu danda'a kan jedhanillee jiru.
Faallaa kanaatiin garuu namoonni ajjeefaman sabaafi amantaan ibsamuun faayida jabaa qaba jedhanii kan barreesanillee jiru.
"Oromiyaa keessatti akka waan saba tokko qofarratti haleellaan raawwate fakkeessanii, duguuggaan sanyii akka raawwatameetti oduun hafarfamaa ture, Qeerroo jumlaan yakkuuf, Oromoos bineensa fakkeessuuf ture" jedhe ogeessi seeraa Efireem Taammiraat.
Skip Facebook post by Ephrem
ጠሚዶ A3 ራሳቸዉ መግለጫዉን መስጠታቸዉ ስለነገሩ የጠራ ግንዛቤ እንዲኖረን ይረዳል። ከመግለጫዉም መካከል፤ "የ86 ሰዎች ህይወት አልፏል፡፡ በዖታ: 82 ወንድ 4 ሴት፤ በብሄር፡ 50...
Posted by Ephrem Tamirat on Sunday, 3 November 2019
End of Facebook post by Ephrem
Ibsi MM Abiy kana kan saaxiledha jedha. Akkuma MM jedhan kan miidhamne hunda keenya ta'uus mul'isa jedha Efireem.
MM Abiy waan biraa maal jedhan?
Itoophiyaan hanga yoonaa kan turte waan wal lollee hin bekneef ykn waan mirgi keenya guutummaatti nuf kabajameef osoo hin taane, sababa gurguddoo sadiifi jedhan MM Abiy.
Kan duraa uummanni Itoophiyaa garaa bal'ata, waanuma xixiqqoon gara wal dhabdeetti hin seenu jedhan.
Seenaa keessatti uummata kana walitti buusuuf yeroo adda addaa yaaliin guddaan taasifameera garuu sababa gara bal'ina uummata Itoophiyaan osoo hin milkaa'iin hafe jedhan.
Kan lammataa aadaa araaraa uummanni Itoophiyaa hundi qaburraa kan ka'e yoo wal dhabellee wal araarfatee waliin jiraachaa ture jedhan.
Kan sadeessoo mul'ata badhaadhinaa fi guddinaa waliin qabnudha jedhan.
Itoophiyaa diigamterraa lammiin Itoophiyaa bu'aa argatu tokkollee hin jiru jedhan.
Yeroo hedduu kan wal dhabnu kaleessa isa jijjiiruu hin dandeenyerratti kan jedhan MM Abiy, kan nu harka jiru har'aa fi jijjiiruu kan dandeenyu boru irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedhan.
Mormiiwwan amma dura mootummaa Hayilasillaasee, Dargii fi sirna waggoota 27 darban ture irratti taasisaa turre, sirna sanarra fooyyee qabu ijaaruuf yoo hin taane maal bu'aa qabas jedhan.
"Tokko fuulduratti, lama duubatti"
Rakkoon tibba kana mudate hunda keenya boquu kan cabsee fi gaddisiise malee enyuyyuu kan boonse miti jedhan.
"Humnoota yeroo nuti tokko fuulduratti tarkaanfannu, lama duubatti nu deebisan dhaabsisuu qabna" jechuunis waamicha dhiyeessaniiru.
Mootummaan dirree siyaasaa bal'isuuf jecha gara bal'ina agarsiise sodaa fi humna dhabuutti fudhachuun dogoggora akka ta'es himaniiru.
Haqaa fi olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u jabeessinee hojjenna jedhan.
Qaamoleen haqaa ariitiin warra miidhamaniif haqa akka kennaniifi waanta irra gahanis uummataaf akka ibsan himaniiru.
Hawaasni fi abbootiin amantaa kanaaf tumsa akka godhanis gaafatan.
Lammileen biyyattii jechaanis ta'e gochaan miidhaa dabalataa fiduu wanta danda'urraa of qusachuun, tokkummaan akka dhaabbatan waamicha dhiyeessaniiru.
Atileet Hayilee Gabrasillaasee: "Itoophiyaan 'duguuggaa sanyii' irraa of eeggachuu qabdi"